रियाद महरेज बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू
घर अफ्रिकी फुटबल स्टोरीहरू अल्जेरियन फुटबल खेलाडीहरू रियाद मह्रेज बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ को जीवनी तथ्य
रियाद मह्रेज बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ को जीवनी तथ्य
LB एक फुटबल जीनियसको पूर्ण कहानी प्रस्तुत गर्दछ, जो उपनाम द्वारा प्रख्यात छ; 'अल्जेरियन रत्न'। हाम्रो रियाद मह्रेज बचपन स्टोरी प्लान जीवनी तथ्यहरू तपाईले आफ्नो बचपनको समय सम्म उल्लेखनीय घटनाहरु को पूर्ण खाता ल्याउनुहुन्छ। विश्लेषणमा उनको जीवन कथा कथा, प्रसिद्धि, पारिवारिक जीवन र उनको बारे मा धेरै ज्ञात तथ्याङ्क भन्दा पहिलेको कथा समावेश छ।
हो, सबैलाई आफ्नो क्षमताहरु को बारे मा थाहा छ तर केहि रिहाद महरेजको जीवनी विचार गर्छ जुन धेरै रोचक छ। अब थप adieu बिना, सुरु गरौं।
रियाद महरेज बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य -बाल्यकाल
रियाद करीम महरेज फेब्रुअरी १ ​​21 of १ को २१ औं दिन फ्रान्सको सरसेल्समा जन्मेका थिए। उहाँ राशिफलबाट मीन हुनुहुन्छ। रियादको जन्म उनको अल्जेरियन / मोरक्कन आमा, हलिमा महरेज र बुबा अहमद महरेजमा भएको थियो।
हुर्किएपछि, रियाद माहरेज नियमित रूपमा आफ्नो बिदाइहरू अल्जेरियामा बिताउँथे। उनी फ्रान्सको सार्सेल्समा हिंसाको वरिपरि हुर्केका थिए। सार्सेल्स आफ्नो हिंसा, लागुपदार्थ कारोवार, आप्रवासी समुदाय र दीर्घकालीन बेरोजगारीका लागि प्रख्यात छ।
अक्टोबर २०० 2005 मा दुई युवाहरूको पुलिस गोली हानी पेरिसको सार्सेल्स र अन्य गरीबीले ग्रस्त उपनगरहरूमा हंगामा भएको थियो। रियादका अभिभावकहरूले आफ्ना छोराहरूलाई हिंसाको सिकार हुने डरले लक र चाबी भित्रै उनीहरूको घरभित्रै रहेछन् भन्ने कुरा सुनिश्चित गरे।
राति रात रात मास्क गरिएका युवाहरूले कार चोरी गरे र त्यसपछि उनीहरूलाई मारे। त्यसोभए, उनीहरूले फ्रान्सेली सशस्त्र दंगा पुलिसको साथ गडबड युद्ध गरे।
सरसेल्स पनि एक माइग्रेन्ट पड़ोस छ जसले शीर्ष मुस्लिम प्रवासी फुटबल खेलाडीहरू बनाएको छ, उदाहरणको लागि Zinedine Zidane। प्रतिभा Zidane रियादले फुटबललाई एक सुरुवात दिन उत्प्रेरित गर्यो।
यद्यपि यो उनका बुबा अहमदले आफ्नो छोराको खेल प्रेमप्रदर्शन गरे। चीजहरू सहज रूपमा चल्नको लागि उसले आफ्नो छोराको फुटबलको विकासमा स्थिर उपस्थिति स्थापित गर्‍यो। अहमद पनि उनलाई प्रत्येक एक खेलमा साथ दिए।
जब मह्रेज पन्ध्र थियो, तिनको बुबालाई हृदयघातको मृत्यु भयो। यसले उसलाई कडा हिटयो। उनले त्यो प्रतिबिम्बित गरे “मेरो बुवाको मृत्युपछि म अझ गम्भीर हुन थालें। जब यो कुरा मेरोलागि जान थाल्यो। ” उनले आफ्नो बूढो मानिसलाई सम्मान गर्न यो समर्थकको रूपमा बनाउन चाहन्थे।
मह्रेजले आफ्नो पिताको मृत्युको रूपमा वर्णन गरे 'सुरुवात' आफ्नो क्यारियरमा। दु: खीमा पछाडि पछाडि, उहाँले त्रासदीको प्रयोग गर्नुहुन्थ्यो "अधिक गम्भीर" फुटबलको बारेमा।
चुनौतिहरू पनि आए जब उनले आफैंलाई धक्का दिए। रियाद महरेज आफ्नो युवा दिनोंमा सबैभन्दा शारीरिक विकसित खेलाडी थिएनन्। उनका युवा प्रशिक्षकले एक पटक उनलाई भने कि उनी यो फुटबलमा कहिले पनि बनाउँदैनन् आफ्नो स्टिक-पातलो देखिन्छन्। उनीहरूले उसलाई सम्झे "धेरै पातलो" पेशेवर फुटबल खेल्न।
एक पल्ट अल्जेरियाई एक पल्ट प्रकट भयो, “उनीहरूले भने कि म धेरै पातलो छु, सबैले मलाई बलबाट खेद्नेछन्। तपाईं, मसँग एक राम्रो प्रविधि थियो तर शारीरिक हिसाबले म ज्यादै शक्तिशाली थिएन। र म छिटो थिइन। तर म सधैं मेहनत गर्थें। ”
रियादले फेरि यो राख्यो, एक व्यवस्थापकले एक पटक उनको सल्लाहमा सल्लाह ... "जब तपाईं पातलो वा सानो तपाईं जस्तो हुनुहुन्छ, ... तपाईं द्वन्दमा हुनुहुन्न," उसले भन्यो। "तपाईंले सम्पर्क बिना नै खेल्नुपर्दछ, तपाईं चलाख हुनुपर्दछ किनकि अब तपाईं त्यति कडा हुनुहुन्न। '
रियाद महरेज बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य -बाधाहरू हटाउँदै
धेरै कमजोर भए पनि, रियाद कहिल्यै हार मानेनन्। यसको सट्टा, उनले पिचमा आफ्ना असफलताहरूको लागि जिम्मेवारी लिन सिके। उनले एउटा त्यस्तो चीजको विकास गरे जुन प्रविधि भन्दा ठूलो थियो। त्यो हिम्मत, बल र चरित्र हो।
अपने पिता की मृत्यु के चार साल बाद, 19-वर्षीय मह्रे ने क्विपर फुटबॉल क्लब के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए, फ्रेंच फुटबॉल की सातवीं श्रेणी में एक टीम।
क्विमर स्क्वाडमा, फ्रान्सेली फुटबलिंग फिनेम पल पोगाबाको भाई मथिटा पोगाबासँग महिन खेलाडी। क्विपरको प्राचीन शहर, फ्रान्सको ब्रिटनमा फ्रान्सले सुपरस्टार फुटबलरको लागि सबैभन्दा अधिक सम्भावित स्थान होइन।
उहाँ क्विम्परमा प्रगति गर्दै जाँदा दुबै पीएसजी र मार्सिले उनलाई हस्ताक्षर गर्न चाहे, तर किशोरले उनलाई अस्वीकार गरे। “No धन्यवाद! "
पीएसजी को लागि हस्ताक्षर को सट्टा, उनको खेल को विकास को लागि दोस्रो-स्तरीय ले हवेरे मा गए। मह्रेज एक क्लब संग साइन इन गर्न को लागी चुनावी कार्यक्रम मा शामिल होने को बजाय उनले पहिलो-टीम को टीम संग खेल्न सक्छन्। उनको निर्णय रद्द भयो, किनकि उसले टोलीको पङ्क्तिबाट गुमायो। 2014 द्वारा, सारा युरोप भर क्लबहरु उनको रडार मा मामिज थियो।
रियाद महरेज बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य -लीसेस्टरको यात्रा
एक गाह्रो दिन, रिहादको जेठो दाइ र प्रबन्धक वाहिदले उनलाई लिस्टर शहरको हस्ताक्षर गर्ने चासोको बारेमा बताए जुन चाहिं अनुकूल हुने सम्भावना बढी हुन्छ। नाम सुनेपछि, 'leicester' मह्रेजले आफ्नो भाइ रग्बी टोलीको बारेमा कुरा गर्दै सोचे। त्यो बेला, leicester अझै चैम्पियनशिप लिगमा थियो र साँचो अंग्रेजी फुटबलको बाहिर। केवल थोरैलाई क्लबको अस्तित्व बारे थाहा थियो। उसले आफ्नो ठूला भाईको कुरा मान्यो र आफ्नो झोला पैक गरीयो
जनवरी 2014 मा, मह्रेज अंग्रेजी पक्ष को लागि हस्ताक्षर गरे लेस्टर शहर.
उसको शब्दमा ... "जब म लेस्टरमा आइपुगें, मैले त्यहाँ सुविधाहरू धेरै राम्रो भएको देखे। म तिनीहरूको लागि हस्ताक्षर गर्न पछुताउँदिन; यो म अहिले सम्म भएको सबै भन्दा राम्रो क्लब हो। ”
उनले उनीहरूलाई च्याम्पियनशिप जित्न मद्दत गरे जसले उनको पहिलो सत्रको अन्त्यमा उनीहरूलाई प्रिमियर लिगमा पदोन्नति दियो। उसको स्टारडमको लागि अपरंपरागत पथ तब आयो जब उसले क्लबको लागि २०१ 2015/२०१lays बार्कलेज प्रिमियर लिगको उपाधि जित्यो।
At leicester, उनले अंग्रेजी अल्जीनियनको लागि सर्वश्रेष्ठ प्लेयर पुरस्कार जित्ने पहिलो अल्जेरियाई र अफ्रिका खेलाडी बने। बाकि, जस्तै तिनीहरू भन्छन्, अब इतिहास हो।
रियाद महरेज बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य -सम्बन्ध जीवन
रीताले एक पटक उनीसँग दर्जनौं अपहरणकारीहरू भएको कुरा प्रकट गर्छिन् र उनले अझै इन्टरनेट ट्रोलको सामना गर्नु परेको बताउनुभयो। मिति रियादलाई स्वीकार गरेपछि, उनले भनिन् ..."एक WAG को जीवनशैली स्पष्ट राम्रो छ, यो does छ its नुकसानहरू - तिनीहरू बीच इन्टरनेटमा दुर्व्यवहारको साथ। " निस्सन्देह, त्यो सुन्दरताको पराजय हो जुन तल फोटोमा देखियो।
माहरेजले २०१ English मा उनको अ English्ग्रेजी प्रेमिका रीता जोहलसँग बिहे गरे। उनले फोकसको पेशागत भविष्य प्रतिबद्ध गर्नु अघि गर्मीमा अंग्रेजी महिलासँग गाँठो बाँधेर राखे।
निस्सन्देह, त्यो पिच बन्दैछ। उनीहरूका छोरी उनी एउटै 2015 मा जन्मिए जसको विवाह भयो।
रिटा लेखन को समयमा रीटा वर्तमान मा दुई को आमा हो। उनको अल्जेरिया पतिले प्रकट गरेको छ कि उहाँ पूर्ण परिवार हुनुहुन्छ।
रियाद महरेज बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य -पारिवारिक जीवन
फुटबल लगानीलाई भुक्तानी गर्नु अघि रियाद मेहेज एक मध्यम-पारिवारिक परिवारको पृष्ठभूमिबाट आए। "हामी निश्चित रूप देखि धनी थिएनौं, तर हामी गरिब थिएनौ," मह्रेज भन्छन्।
फेथर: उनका बुबा अहमद बेनी स्नूस, अल्जेरियाको ट्लेसेन जिल्लाका थिए। उनी मोरोक्कनको सिमाना नजिक पर्ने पश्चिमी अल्जेरियाको ग्रामीण इलाकाको अल खेमीको सानो गाउँमा हुर्केका थिए।
एक मध्य-वर्ग परिवार बाट, अहमद एक गिफ्ट विद्यार्थी अध्ययन गणित थियो। उनी आफैं पनि एक कुशल खेलाडी थिए। माहरेजका बुबाले अल्जेरिया र फ्रान्सका साना टिमहरूको लागि व्यावसायिक फुटबल खेलेका थिए। तल उसको खेलको दिनमा फोटोहरू छन्।
स्वर्गीय अहमद महरेज।
स्वर्गीय अहमद सधैं आफ्नो छोराको पछाडि हुन्थे र उनको जन्ममा उनी रियादलाई फुटबलर बन्न चाहन्थे। अर्कोतर्फ रियाद सधैं उनको कुरा सुन्थे। यद्यपि, डाक्टरहरूले युवा अहमदलाई मुटुको अवस्थाका साथ पत्ता लगाए पछि सबै परिवर्तन भयो जसले उनलाई उपचारको लागि युरोप पठाउँदै छ।
यो उनको परिवारको लागि गरिबीको शुरुवात थियो जो आर्थिक जीवन बिताउन संघर्ष गरियो। उनीहरूले उनको दबाइको लागि पैसा कमाउन असमर्थ थिए। मह्रेजका पिता, अहमद 54 को उमेर मा बित्यो जब उनको दोस्रो छोरा, रियाद सिर्फ 15 थियो। उहाँ आज गर्व गर्नुहुने व्यक्ति हुनुहुन्छ जसले आफ्नो पिताको महत्वाकांक्षा पूरा गरेको छ
मातृभाषा: रियाद महरेजकी आमा, हलिमा महरेजले आफ्नो पति गुमाएको क्षणदेखि नै महरेजको लागि प्रेरणाको स्रोत बन्नुभयो। तल उनको भित्रको छोराको सफलताको उत्सव मनाईएको छ leicester.
रियाद माहरेज आमा, हलीमा र उनको छोरो।
वास्तवमा, उनी त्यहाँका हरेक चरणमा उनको लागि थिए। हलिमा एक पटक आफ्नो छोराको लागि एक मातृभाषामा गियर गरे पछि जान्न एक महान व्यक्ति हुनेछ।
उनको शब्दहरुमा .."मेरो आमा सधैं कामबाट घर आउनुभयो र सबै कुरा गर्नुभयो ताकि हामीले राम्रो खायौं।" रियादकी आमा भर्खरै फ्रान्सको सार्सेल्स छोडेर गए। उनको छोड्नुको कारण, उनले भनिन् ... "मान्छेहरू मेरो छोराको सफलताको बारेमा डाह भएका छन्, यद्यपि उसले आफ्नो जरा बिर्सेको छैन।"
भाइरस: आफ्नो पिता गुमाए पछि, रहिद को लागि एक पिता को आंकडा को रूप मा वाहिद मह्रे ले संधै एक पिता को भूमिका निभाए। उहाँ अहिले आफ्नो करियर प्रबन्ध गर्नुहुन्छ। उहाँ कारण रियादको लागि हस्ताक्षर भएको कारण हो leicester.
रियाद र उनका भाई वाहिद महरेज।
रियाद मह्रेज बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य -पिज्जा निर्माता
एस्टाइड फुटबल, रियाद माहरेज आफ्ना साथीहरूसँग पिज्जा बनाउन मन पराउँछन्। उनी सबैको साथ हुन्छन्। यदि फुटबलको लगानी चुक्ता नगरेको भए, रियाद सम्भवतः पिज्जा मानिस हुन्। उसको हावामा पिज्जा टास गर्दै हेर्नुहोस्।
रियाद मह्रेज बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य -पहिलो अल्जीरिया को स्कोर हाइट्रिक को
रियाद महरेज पहिलो र एकमात्र अल्जेरियन हो - कम्तिमा समयको लागि - उसले प्रिमियर लिगको ह्याट्रिक लगाएको छ।
5 डिसेम्बर 2015 मा, 25-वर्षले यो प्रभावकारी फीचहरू प्राप्त गरेको थियो लेस्सेस्टरको निर्णायक 3-0 विजयस सिटी सिटीको विरुद्धमा। तापनि अली बेनबेरिया, जो 2001 देखि 2003 को बीच मैनचेस्टर सिटी को लागी खेल्न को लागी यो उपयोग नहीं गरेर सके।
रियाद महरेज बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य -विश्वास
मह्रे एक व्यावहारिक मुस्लिम हो। जुन २०१ 2017 मा, उनले मक्कामा हज यात्रा गरे।
रियाद मह्रेज बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य -राशिफल ट्रेट्स
रियाद महरेजको राशि मीन हो र उनको व्यक्तित्वमा निम्न विशेषताहरू छन्;
रियाद महरेजको शक्तिहरू: दयालु, कलात्मक, सहज, सज्जन, बुद्धि, संगीत।
रियाद महरेजको कमजोरी: भयभीत, अधिक भरोसा राख्ने, दु: खी, वास्तविकताबाट उम्कन चाहने, पीडित वा शहीद हुन सक्छ।
कुन रियाद मह्रे मन पराउँछन्: एक्लै हुनु, सुत्न, संगीत, रोमान्स, भिजुअल मिडिया, स्विमिंग र आध्यात्मिक विषयवस्तुहरू।
के रियाह माहरेज मन नपर्ने: थाहा छ, सबै आलोचना गरिरहेको छ, विगतका आक्रोशित हिंसा र कुनै किसिमको क्रूरता।
रियाद महरेज बाल्यकाल कहानी कहानी अनडोल गरिएको जीवनी तथ्या reading्क पढ्नु भएकोमा धन्यवाद। LifeBogger मा, हामी शुद्धता र निष्पक्षताको लागि प्रयास गर्दछौं। यदि तपाईं केहि देख्नुहुन्छ जुन यो लेखमा ठीक देखिँदैन भने, कृपया तपाईंको टिप्पणी दिनुहोस् वा हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्!
अल्जेरिया फुटबल डायरी
वेस्ले फोफाना बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू
राम्रो जानकारी तर यार आयो जिदाने सार्सेल्सबाट आउँदैन ऊ मार्सिलेको ला कास्टेलनेबाट हो जो फ्रान्सको सबैभन्दा हिंसात्मक शहरको सबैभन्दा हिंस्रक हुड हो, यसलाई एक दुर्ग मानिन्छ त्यहाँ जान्छ पुलिस त्यहाँ हिंड्न हिम्मत गर्दैन। .यो त्यति पछि त्यति खराब थिएन तर यो सँधै खराबै भएको छ। त्यसैले यसलाई सच्याउनुहोस्।
परिमार्जित मिति: जनवरी ,०, २०१ 1
परिमार्जित मिति: नोभेम्बर 11, 2020
परिमार्जित मिति: अक्टोबर,, २०१ 30